विश्वकप क्रिकेट : श्रीलंका र दक्षिण अफ्रिका भिड्दै, पल्लाभारी कसको ? « Kakharaa
विश्वकप क्रिकेट : श्रीलंका र दक्षिण अफ्रिका भिड्दै, पल्लाभारी कसको ?
काठमाडौं । विश्वकप क्रिकेटमा आज श्रीलंकाले दक्षिण अफ्रिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ ।
रिभरसाइड मैदानमा आज नेपाली समयअनुसार ३ बजेर १५ मिनेटमा श्रीलंका र दक्षिण अफ्रिकाबीचको खेल सुरु हुँदैछ । दुई टिम जितको खोजीमा हुनेछन् ।
सेमिफाइनल यात्रालाई कायमै राख्नका लागि आजको खेल श्रीलंकाको लागि जित्नै पर्ने हुन्छ । तर पराजित भएमा श्रीलंकाको सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना कमजोर हुनेछ । ६ खेलमध्ये दुई खेलमा जित दुई खेलमा हार र दुई खेल वर्षाको कारण रद्द भएपछि अंक बाँडेको श्रीलंकाको ६ अंक छ ।
अहिले अंक तालिकाको सातौं स्थानमा रहेको श्रीलंका अन्तिम चारमा पर्दै सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनका लागि उसले अबको सबै खेल जित्नु पर्ने हुन्छ । एक खेल हारेको खण्डमा पनि श्रीलंका सेमिफाइनलमा पुग्ने सम्भावना हुन्छ । तर पाकिस्तान र इंग्ल्यान्डले बाँकी सबै खेल हार्नु पर्ने हुन्छ ।
यता, दक्षिण अफ्रिका भने विश्वकप क्रिकेटबाट बाहिरिसकेको छ । उसले खराब प्रदर्शन गर्दै एक खेलमा मात्रै जित र पाँच खेलमा हार तथा एक खेल पानी परेपछि अंक बाँड्दै तीन अंक बनाएको छ । खराब लयमा रहेको दक्षिण अफ्रिकाको अबको खेल उसको प्रतिष्ठाको लडाईँ मात्रै हुनेछ ।
तेस्रो टि–ट्वान्टी खेलमा इंग्ल्याण्ड विजयी
एजेन्सी । पाकिस्तान विरुद्धको ट्वेन्टी ट्वेन्टी अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट श्रृंखला इंग्ल्याण्डले जितेको छ । तेस्रो तथा
आयरल्याण्डविरुद्धकाे पहिलाे टि–ट्वान्टी क्रिकेटमा दक्षिण अफ्रिका विजयी
एजेन्सी । आयरल्याण्डविरुद्धको पहिलो टि–ट्वान्टी क्रिकेटमा दक्षिण अफ्रीका विजयी भएको छ । आयरल्याण्डको डब्लिनमा गएराति
टी-२० विश्वकप क्रिकेट : भारत र पाकिस्तान एउटै समूहमा
एजेन्सी । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद्ले आसन्न टी–२० विश्वकपको समूह विभाजन गरेको छ । सुपर–१२ को